Chrome နဲ့ Firefox တို့ဘယ် Android browser ကပိုမြန်လာမှာလဲ။ | Androidsis
Speed ​​test: Chrome နဲ့ Firefox တို့ရဲ့ဘယ် browser က Android အတွက်မြန်မှာလဲ။
ဒီကနေ့ Androidsis ပါ, များစွာသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသူတို့အားရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် Android အတွက်အကောင်းဆုံး web browser များ။ တဖကျတှငျကြှနျုပျတို့ရှိသည် Android အတွက် Firefox နှင့်အခြားအပေါ်အနန္တတန်ခိုးရှင်နှင့်အနန္တတန်ခိုးရှင် Android အတွက် Google Chrome.
ဒီအချိန်ကအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီဖြစ်နေပြီ Firefox vs Chrome ကျွန်ုပ်တို့၏ web browser နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်လေ့ရှိသောအသုံးအများဆုံးအလုပ်များတွင်နေ့စဉ်နှင့်အမျှပုံမှန်ပြုလုပ်သောအလုပ်များဖြစ်သည် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ပါ.
ဗီဒီယိုက လှန်လှန်ပြီးသား fixed လေယာဉ် ဒါကြောင့်သေချာပေါက်ရှိလာနိုင်မယ့်အတွေးအမြင်အရှိဆုံးကတော့ရုပ်ပုံတွေကိုလှည့်စားတာ၊ လှည့်စားတာမျိုးမလုပ်မိဖို့ပါ။
အလားတူပင်ငါသိသကဲ့သို့ငါများစွာသောလူကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုအပြစ်တင်သွားခဲ့ကြသည် LG G2 နှင့် LG G3 တို့ဖြစ်သည်ငါစမ်းသပ်မှုကိုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးပြီ။ အကယ်၍ LG G3 နှင့် LG G2 Firefox တွင်ပထမဆုံး Google Chrome ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုကိုအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုထပ်တူပြုခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်လိုသည်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ် လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်ကတ်ထူပြားမရှိပါ နှင့်ရလဒ်များကိုသူတို့ကဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ။
Android အတွက်ဘယ် web browser ကိုသင်အလျင်မြန်ဆုံးလို့ထင်သလဲ Chrome သို့မဟုတ် Firefox?ဒီရလဒ် Firefox vs Chrome သူတို့ကိုဤစာမူ၏ထိပ်ရှိဗီဒီယိုတွင်သင်ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » Speed ​​test: Chrome နဲ့ Firefox တို့ရဲ့ဘယ် browser က Android အတွက်မြန်မှာလဲ။
ဟိုဆေး M ဟုသူကပြောသည်
Dolphin နှင့် Crome တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ
jose M ကိုပြန်ပြောပါ
အချိန်တိုအတွင်းမြန်နှုန်းသစ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောဤအချိန်၌ Chrome နှင့် Dolphin Browser တို့ဖြစ်သည်။
အိုကေငါအဲဒီလိုလုပ်မယ် ၎င်းသည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများ၏ဗီဒီယိုအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
အလက်ဇန်းဒါး Fermin ဟုသူကပြောသည်
ငါ Habit Browser (ပုံမှန်မဟုတ်သော) နှင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြည့်ချင်ပါတယ်၊ လူအနည်းငယ်သာသိပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်တော့ထူးခြားသည်
အလက်ဇန်းဒါး Fermin မှတုံ့ပြန်ပါ
LG G Watch အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော charger တစ်ခု
Media Markt မှဖော်ပြသည့် Galaxy Note4၏စျေးနှုန်း